Ifama ye-Eco iMilanovic-igumbi loku-1
Ifama ikwimpuma yeSerbia, kwilali encinci iLipovica.
Sinezindlu ezi-3 kunye namagumbi ama-3 anegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, umthamo omkhulu wabantu abangama-21. Olu ludweliso lwamagumbi- khangela ikhonkco lamagumbi: https://www.airbnb.com/rooms/2224833
Yonwabela indalo, ukutya okuphilayo, imisebenzi yasimahla-ukukhwela ihashe, ukhenketho lwejeep, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile.
Kwisangqa se-30km ungafumana ezinye zezona ndawo zidumileyo eSerbia -monastery Manasija ukusuka kwinkulungwane ye-XIV, umqolomba weResava, ingxangxasi uLisine i Prskalo...
Ifama ibekwe malunga ne-140km ukusuka eBelgrade, i-2h yokuqhuba.
Indawo ekwanti yokwenyani kwimpuma yelali yaseSerbia, ejikelezwe ziinduli kunye nendalo etyatyambayo.
Uya kwamkelwa ngezizukulwana ezi-3 zentsapho yaseMilanovic, abagcini besithethe kunye nenkcubeko yalo mmandla - uBojan noJasmina kunye nabantwana, amawele uStefan kunye noSrecko kunye nentombi kaSofija, oogogo nomkhulu uMilutin noRadojka.
Ifama ye-Eco ikude nendawo yasedolophini kunye nezixeko ezikhulu, ibonelela ngendawo yokuhlala ezolileyo ngokupheleleyo ngaphandle kongcoliseko lwangoku.
-Umoya omtsha nococekileyo wentaba ovela kwiintaba ezikufuphi zaseHomolje.
- Amanzi acocekileyo nasemgangathweni aphuma kwiqula lendalo elikufuphi ngqo efama.
- indawo ezolileyo, ngakumbi ebusuku xa usiva iintaka zasebusuku kuphela.
-Ukutya okusempilweni nokunencasa yendalo kunye ne-eco eveliswa kwifama yeendwendwe.
Sinikezela ngemenyu epheleleyo, izinto ezikhethekileyo zasekhaya ezenziwe ngezandla zenkosi yenkosi uJasmina.
Isidlo sakusasa - 4 euro
Isidlo sasemini - 7 euro
Ukutya isidlo - i-euro eyi-7
Zonke izidlo zinkulu kunye nezithako ezivela kwifama yethu okanye ezilalini. Iziselo zibandakanyiwe kwixabiso: ikofu, iti, ibhiya yasekhaya, irakia, iwayini, iijusi...
Imenyu yemveli, nto leyo ethetha inyama eninzi kunye neemveliso zezilwanyana. Sinikezela ngemenyu yabatya imifuno kunye nazo naziphi na ezinye iintlobo zokutya.
Intlanzi ye-trout entsha inikezelwa kwisimangaliso sendalo esikufutshane saseKrupaja kakuhle.
Ukutya kungahanjiswa nangaliphi na ixesha olinqwenelayo. Unokucela ukutya kwangaphambili okanye xa ufika. Ukutya akufakiwe kwixabiso.
Uya kuba nethuba lokufumana indawo entle ejikeleze ifama kunye nendawo, ukubona ubomi bemihla ngemihla bosapho lwelali, kwangelo xesha linye ukonwabela ubumfihlo bakho.
Sinikezela ngemisebenzi emininzi ngexesha lokuhlala kwakho, ukusuka ngokulula ukuhamba ukuya kwimidlalo ye-adrenaline.
- ukukhwela ngemva ehashini.
- ngaphandle kokhenketho lwejeep ukuya kwi-5 km ukujikeleza ifama.
- ukurenta ibhayisekile (3 abadala, 3 abantwana).
-Iindlela ezi-7 eziphawulweyo zokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, iiquads.
- ukuhamba kwindlela yejeep, ukutyelela iiperile zommandla: i-monastery Manasija, umqolomba weResava, i-waterfall uLisine, intaba yaseBeljanica, i-waterfall Prskalo, i-Krupaja kakuhle kunye nezinye. Ubuncinci abantu aba-4 (i-jeep e-1), ixabiso le-10E ngomntu ngamnye (okanye i-40e jeep kubantu abancinci) kukhenketho kude kube yi-35km. Kwixabiso kubandakanywa ipakethe yesidlo sasemini (itshizi yasekhaya, isangweji, irakia, ijusi, amanzi).
Zinokuba zininzi iijee zamaqela amakhulu. Ukhenketho luqhutywa ngabahlobo bethu, iigurus zalapha ezisuka kwiklabhu yejeep engaphandle kwendlela 'Resava 4x4 Lipovica'.
-Paragliding ukusuka kwenye yezona ndawo zibalaseleyo eSerbia-Krilas. I-paragliding yeClassic okanye i-motor paragliding, eqhutywa ngabaqhubi abanamava kunye nabahlobo bethu abavela kwiklabhu ye-aero Krilas. Ixabiso yi40e. Cela i-paragliding kwangaphambili ukujonga iimeko zemozulu ngenqwelomoya yakho ekhuselekileyo.
- Isidlo sasemini kwindalo, encotsheni yeentaba, phantsi kweengxangxasi kunye nezinye iindawo ezimangalisayo zendalo. Isidlo sasemini sihlala sihamba nge-jeep off road excursions: iigusha kunye nehagu bbq, ihagu ebhakiweyo, i-kacamak, ezinye iimveliso ezivela kwifama yethu.
Ukuba uza ngemoto, unokwenza uninzi lohambo ngokwakho, apho imoto inokuhamba khona.
Ukuba uza ngaphandle kwemoto, umhlobo wethu, umqhubi weteksi wasekhaya obizwa ngokuba nguKadir unokuba ngumqhubi wakho kunye nesikhokelo sasekhaya ngexabiso elincinci. Kwakhona iguru lendawo eyaziyo yonke imilimitha yendawo.
Kukho izindlu kwiinduli ezijikelezileyo. Abamelwane bokuqala bamalunga nama-500m ukusuka efama. Indawo yakho yokuhlala ibekwe kumda wentaba iHomolje. Indawo yodwa kwiindlela eziphambili, nayiphi na ingxolo, umoya ococekileyo welali, umoya omtsha, indalo, izilwanyana...
Ifama ye-Eco ibekwe kwindawo efanelekileyo yokutyelela indawo yaseResava. Kwisangqa se-30km ungandwendwela i-monastery Manasija, umqolomba weResava, ingxangxasi uLisine kunye nePrskalo, iKrupaja kakuhle, intaba yaseBeljanica.. Jonga iifoto zoluhlu ukuze ubone zonke iihambo ezijikeleze umgama kunye nohlobo lwezithuthi onokuzisebenzisa.
UBojan Milanovic kunye nentsapho yakhe baya kukwamkela ngokuzonwabisa, nangaliphi na ixesha oza, kusasa, imini okanye ebusuku. Akukho uxinzelelo malunga ne-chek in / jonga, thatha ixesha lakho.
Bahlala behlala kwimisebenzi emininzi yemihla ngemihla, kunye nabakhenkethi okanye ngaphandle kwefama / imisebenzi yezolimo, kodwa lonke ixesha kwinkonzo yakho.
Ungaphuthelwa ukufumana isidlo sakusasa ubuncinci apho, sesona sidlo simnandi, sisempilweni kwaye sisemgangathweni oya kukutya eSerbia okanye ngokubanzi.
Ndiza kuba kwi-intanethi kunye nefowuni ngexesha lokuhlala kwakho kuyo yonke into onokuyidinga.
Kananjalo ndingakunika ulwazi oluninzi malunga nefama, ejikelezileyo, iSerbia ngokubanzi. Ungalibazisi ukunxibelelana nam ngalo naluphi na ulwazi okanye uncedo onokulufuna.
Yonwabela iSerbia, iLipovica kunye nefama ye-eco iMilanovic! Wamkelekile nanini na.
UBojan Milanovic kunye nentsapho yakhe baya kukwamkela ngokuzonwabisa, nangaliphi na ixesha oza, kusasa, imini okanye ebusuku. Akukho uxinzelelo malunga ne-chek in / jonga, thatha…